Burmese taste - Iora: ကြက်ဥချဉ်ရည်၊ ဘာလချောင်ကြော်၊ ဆလတ်ရွက်သုတ်၊ ငါးပိထောင်း၊ ချဉ်ဖတ်
Posted by Iora at 12:43 AM
Taw lite tae thu nge chin lay!
you areatusker too.I also make chinphat for my Da Da "ANYARTHA" sometimes and make kabyar ice burg lecttue salad.I mix shrimp powder,olive oil,fish sauce and lemon juice for us and add green chile for him.Bon appetie!
Iora January 18, 2012 at 11:53 PM
Taw tar tawt ma pyaw ne..char nay tar be....:)
We make the salad with same style.Then..we have the same taste...It is amazing. naw!
ကောင်းမွန်ဝင်း January 18, 2012 at 2:17 AM
ဆလပ်ရွက်သုပ်မှာ ရှာလကာရည်အစား စပျစ်ယိုထည့်တာ သဘောကျတယ်။ အင်း အဲလိုလည်း အစားထိုးတတ်ဘို့လည်း လိုတယ်နော်။ ချဉ်ပတ်တောင်တည်စားတယ်ဟုတ်လား။ မြန်မာချဉ်ပတ်တည်နည်းပေါ့နော်။ ကျွန်မတော့ ဂျပန်ချဉ်ပတ်မြန်မာနဲ့တူတာတွေဝယ်စားတယ်။ မြန်မာချဉ်ပတ်မလုပ်တတ်သေးဘူးလေ။ ချဉ်ပတ်လေးနဲ့ ဆို ဘာလချောင်ကြော်ဖြစ်ဖြစ် ငရုပ်သီးထောင်းလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်နော်။
Iora January 19, 2012 at 12:02 AM
ကြက်ဥဟင်းကုို သင်တန်းတစ်ခုတက်ရတုန်းက စားရလွန်းလို့ တနှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ဘဲဥရောကြက်ဥရောမုန်းသွားဘူးတယ်။ လုံးဝမစားတော့တာနောက်မှပြန်စားတာ..ဟိ.
ဘိုစတိုင်သုတ်ရင်နဲနဲလေးချိုတာပိုသဘောကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ရှာလကာရည်တော့သိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်။ ဂျပန်ကိုရောက်တုန်းက ဆုိုင်တွေမှာပေးတဲ့ချဉ်ဖတ်ကိုကြိုက်တယ်။ အဲလိုမျိုးလွယ်လွယ်ဝယ်ရရင်ကောင်းမှာဘဲ။ ဒီမှာ မြန်မာချဉ်ဖတ်တော့ကုိုယ်လုပ်မှစားရတာပါ။ ကင်ချီတွေတော့စုံတယ် လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ ရတယ်။
ဟုတ်တယ် ကောင်း။ ဘာလချောင်ကြော်နဲ့ ချဉ်ဖတ်နဲ့ လည်းလိုက်တယ်နော်။
subuueain January 18, 2012 at 3:40 AM
ကြက်ဥချဉ်ရည်နဲ့ ဘာလချောင်ကြော်ကတော့ အလွန်ကို လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းစပ်ပါဘဲနော် :)
Iora January 19, 2012 at 12:04 AM
ဟုတ်တယ် နော်။ ဘာလချောင်ကြော်ကြော်ဖြစ်လို့ လည်း ကြက်ဥချဉ်ဟင်းချက်ဖြစ်သွားတာပါ။
Candy January 18, 2012 at 4:38 AM
ကြက်ဥချဉ်ဟင်း အရမ်းအရမ်း ကြိုက်တာ... စားချင်စရာကြီး... ရှလွတ် :D
Iora January 19, 2012 at 12:05 AM
စားသွား အ၀စားသွားနော်။ ပုံနဲ့ ကျွေးနေတာ..း)))
မီးမီးငယ် January 18, 2012 at 5:21 AM
အံသွားတွေ၃ ချောင်းလုံးနုတ်ထားရလို့ ။
Iora January 19, 2012 at 12:11 AM
အုိုးလိုက်အပြင်မှာတကယ်မသွားရင်ကောင်းမှာ။ တော်တော်စားလိုက်ရတယ်။ သူကအရမ်းကြိုက်တော့များများချက်လိုက်တာ။
အံသွားတွေ နှုတ်ထားတော့ ၀ါးစရာတွေဘယ်စားလို့ ရမလဲနော်။
ဟင်းတွေက ပုံထဲမှာဆုိုတော့ ငံတာတွေချဉ်တာတွေမသိရဘူးလေ နော်။
မီးမီးဟင်းတွေလည်း ဒို့ ကကြိုက်တယ်။
Shinlay January 18, 2012 at 8:37 AM
ကြက်ဥချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း တို့ စရာတွေနဲ့ ..
Iora January 19, 2012 at 12:13 AM
စားလို့ မြိန်တယ်ရှင်လေးရေ။ မနဲဘရိတ်အုပ်ရတယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) January 18, 2012 at 11:46 AM
Iora January 19, 2012 at 12:14 AM
san htun January 18, 2012 at 2:09 PM
Iora January 19, 2012 at 12:16 AM
mstint January 19, 2012 at 12:25 AM
Iora January 19, 2012 at 1:35 AM
ညယံ January 19, 2012 at 3:24 AM
ကြက်ဥချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ပါလချောင်ကြော် ကြိုက်တယ် ..
ပူတင်းလေး စမ်းလုပ်ကြည့်တယ် .. တော်တော် အဆင်ပြေတယ်..
အချိုးအဆတွေ သေချာရေးပေးတာ ကျေးကျူးကမ္ဘာဆိုင်ရော .. :)))
ဘိုဖြူ January 19, 2012 at 5:16 AM
စားဖိုမှူး January 20, 2012 at 5:00 PM
ပူတင်းစမ်းလုပ်ကြည့်တာလည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကြားရတော့တကယ် ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ကုိုယ်လည်း ပူတင်းလုပ်နည်းသိချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ အချိုးအဆတွေမှတ်မှတ်ရရမှတ်ထားလိုက်တာ။ အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေသလုို ကုိုယ်လည်းနောက်ပြန်ကြည့်လို့ ရတော့ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေတာပါဘဲ။
ချဉ်ဖတ်တည်တာ အချိန်အတွယ်တခါမှ မမှတ်ထားမိလို့ ဆောရီးနော်။
အကြမ်းဖြင်းပြောရရင်တော့ ကျမက ဆန်ဆေးရည် နဲ့ ဆား နဲ့ ထဲ့တာပါဘဲ။ မြန်မြန်ချဉ်ချင်ရင် ထမင်းကြမ်းနဲနဲထဲ့လုိုက်ပြီး ကိုယ်ထဲ့ချင်တဲ့ အရွက်ရေဆေးပြီး အရည်မြုတ်အောင်ထဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့အဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ နေပူပြလည်းရပါတယ်။ ကျမတော့ အခြေအနေပေးသလိုလုပ်လိုက်တာပါဘဲ။ ထမင်းရည်နဲ့ လည်း ဆားထဲ့ပြီးတည်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကတော့ အိမ်စားလုပ်တာပါ။ အများကြီးတော့ ဘယ်လိုလုပ်လည်း မပြောတတ်ဘူး။
မြစ်ကျိုးအင်း January 21, 2012 at 8:21 AM
ဘာလချောင်ကြော်နဲ့ ငပိထောင်းမြင်တာ တကယ်ကို သရေယိုသွားတယ်။
(ဒါထက် ကွန်မန့်ပေးဖို့ ဘယ်နားနှိပ်ရမှန်းကို မသိဘူး။ ဒါကြောင့် Reply လုပ်ပြီး ပေးလိုက်ရတယ်ဗျို့။)
Iora January 21, 2012 at 8:13 PM
အဲ နှိပ်စက်သလိုဖြစ်သွားတာတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။း))
ပြီးတော့ left alignment လည်းမဟုတ်ဘူး။
ကလိရအုန်းမယ်။ အဆင်မပြေတာတွေ သီးခံလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန့် ရအောင်ပေးခဲ့လို့ ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့ ..
Monmon Yoko January 22, 2012 at 6:13 AM
ဓာတ်ပုံတွေလှတယ်။ ပုံတွေကြည်.ပီး စားချင်လာတယ်။ စပျစ်ယိုနဲ.salad ကိုသဘောကျလိုက်တာ။ စိတ်မှန်းနဲ.စားသွားတယ်။ :)